Tsy nety taminy mantsy ilay efitrano nisy azy ka vao mainka nampihetsika be ny allergie-ny raha araka ny fantatra. Manao dialyse in-telo isan-kerinandro i Eric raha araka ny fanazavan’ny vady andefimandriny. Noho izany, mbola mitohy hatrany ilay hetsika tolo-tanana nokarakarain’izy ireo ho an’ireo izay mbola vonona ny hanampy sy hanohana. Mikasika ny fandehanana hivoaka any ivelany hahafahana manao ilay transplantation na grefin’ny voa dia fantatra fa efa eo am-pelatanan’ny fitondram-panjakana ny taratasy rehetra mifandraika amin’izay. Raha tsiahivina, manodidina ny 250.000 Ar ny manao dialyse ho an’olona iray marary voa amin’izao eto amintsika. Manodidina ny 70 tapitrisa Ar kosa ny vola ilaina raha hanao transplantation izay vahaolana hany tokana hahafahana miady tanteraka amin’ity aretina iray ity.